China Screw Conveyor Manufacture and Factory | Chinatown
Ny mpampita fantsom-panafody premium antsika dia mety amin'ny fampitana vovoka, granular, lumpish, koba tsara toto sy marokoroko toy ny arina, lavenona, simenitra, voamaina, sns. Ny mari-pana mety amin'ny fitaovana dia tokony ho latsaky ny 180 ℃. Raha mora simba ilay fitaovana, na atambatra, na miraikitra be ilay fitaovana, dia tsy tsara ny mampita an'ity milina ity.
Ny zana-kazo mihombo miaraka amin'ny visy dia apetraka ao anaty casing type trough. Ny vokatra granular na pulverulent dia ampidirina ao anaty masinina ary afindra mahitsy mankany amin'ny fivoahana amin'ny alàlan'ny visy mihodina mifatotra eo amin'ilay hazo.
Raha te hanana toerana fampitaovana mety tsara ho an'ny mpampita visy varimbazaha, mpanondrana visy sakafo, mpampita sakafo na mpampita malt dia amporisihina mafy ianao handinika ny vokatray izay voatanisa etsy ambany ny antsipiriany.
1. Ny fitaovana dia miaraka amina endrika maodely sy fanamboarana faran'izay tsara.
2. Ireo lalantsara sy fivoahana dia azo alamina araka ny takiana
3. Ny trano feno vovoka dia mitarika fahadiovana avo lenta.
4. Mora ny mitazona ny mpampita halatra.
5. Ny fananana fanjifana angovo miasa ambany dia misy.
6. Ireo singa rehetra dia vita amin'ny akora ara-tsakafo na miaraka amina fonosana sakafo manokana.
7. Misy vavahady mihoampampana misy fiarovana miaro anao manokana.
8. Ny lavarangana fidirana dia miaraka amina visy fiaramanidina matevina miandalana ho an'ny famoahana fitoeram-pako fitoviana.
9. Ny vavahady eo anelanelan'ny mpampita ny visy dia misy vavahady misosa.
10. Ny multi-layer anti-corrosive coating dia ampiasaina amin'ny fampiharana ivelany.
11. Misy mekanisma fiara mivantana.
12. Ao amin'ny mpampita visy dia misy fampifanarahana miovaova eo anelanelan'ny fiara sy ny vatan-tsolika.
13. Ny maody marindrano sy ny maody mirona dia samy misy amin'ny fampitaovana, fizarana, fanangonana, fampifangaroana ary famoahana.
14. Ny vodin-tsolika dia mifandray amin'ny fitondra mihantona, ny lohan-doha, ny tailshaft amin'ny alàlan'ny fifandraisana tafiditra. Noho izany dia tsy ilaina ny hetsika axial amin'ny fametrahana azy, ary ny fisarahana, mahatonga ny fanamboarana ho mora vidy.
15. Ireo mpandeha an-doha amin'ny vodin-doha sy rambony dia samy ivelan'ny casing an'ny conveyor visy. Ny fiterahana tsirairay dia miaraka amin'ny haitao famehezana maro sosona mba hanitarana ny ain'ny serivisy.
Endri-javatra tsy voatery
1. Azo ampiana ny visy vy sy tavin-drano vy ho an'ny fanamainana ny varimbazaha na lafarinina hahazoana fanadiovana tsara kokoa.
2. Ny visy karazana paddle dia raisina ho fampifangaroana.
3. Ny palitao namboarina dia tsy voatery ho an'ny mpampita.
4. Ny vavahady ambany dia tsy voatery atao amin'ny fanadiovana mora ny visy sy ny lovia.
Karazana Max. Fahafahana (t / h) Max. REV (r / min) Screw Diameter (mm) Screw Interval (mm)
koba tsara toto vary
Teo aloha: Mpampita ny rojo boribory
Manaraka: Mpitondra rojo